| ०:०४:२३ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७७ साल फाल्गुन ०२ गते । आईतबार इ.स.२०२१ फेब्रुवरी १४ तारिक । शकसंवत् १९४२ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । शिशिर ऋतु । नेपाल संवत् ११४१ । माघ शुक्लपक्ष । तिथी– तृतीया,२५ बजेर ४२ मिनेट उप्रान्त चतुर्थी । नक्षत्र–पूर्वाभाद्रपदा,१६ बजेर ३६ मिनेट उप्रान्त उत्तराभाद्रपदा । योग–सिद्ध,२५ बजेर २९ मिनेट उप्रान्त साध्य । करण–तैतिल,१३ बजेर ०८ मिनेट उप्रान्त गर,२५ बजेर ४२ मिनेट उप्रान्त वणिज । आनन्दादिमा–चर योग । चन्द्रराशि–कुम्भ,१० बजेर १३ मिनेट उप्रान्त मीन । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ४४ मिनेटमा,सूर्यास्त १७ बजेर ५३ मिनेटमा । दिनमान २७ घडी ४२ पला ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ):- बिहानको समय उत्तम रहेकोले बैकिङ क्षेत्रमा लगानी गरी आम्दानी बढाउन सकिने छ । प्रविधिको प्रयोग गरी अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिने छ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ । मध्यान्हबाट साथीभाई तथा आफन्तहरुको भेटघाटले नयाँ काम गर्ने अवसर आएपनि फाईदाको लागि अलि बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्या आउने भएपनि दैनिक काम गर्न गाह्रो हुने छैन ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो):- व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । दाजुभाई तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग हुनेछ । मायाप्रेममा सामिप्यता बढेर जाने ग्रहयोग रहेको छ । सवारीसाधन तथा अन्य भौतिक सम्पतिहरु लाभ हुनेछ ।पढाईलेखाइमा सुधार हुने हुनाले अरु भन्दा अगाडि बढ्न सकिनेछ । ईच्चा आकांक्षा तथा मनोकामना पुरा हुने समय रहेको छ भने रोकिएका कामहरु बन्ने तथा नयाँ काम गर्ने अवसर आउनेछ ।
मिथुन ( का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) :- राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन पाईनेछ । नयाँ काम पाउने तथा व्यापारमा प्रशस्त आम्दानी हुनाले आर्थिक स्थिति सुदृढ हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । अध्ययनमा राम्रो सफलता हात लाग्नेछ । प्रणण सम्बन्धको डोरो कसिलो भएर जानेछ । पैत्रिक सम्पति तथा सरकारी सम्पतिको प्रयोग गर्न पाईने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ ।
कर्कट ( ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो):- बिहानको समय मध्यम रहेकोले स्वास्थ्यमा समस्या आई शुरु गरेका कामहरु सम्पादन गर्न सकिने अवस्था रहने छैन भने सहयोग गर्ने भन्दा आश्वासन बाड्नेहरू धेरै भेटिनेछन् । मध्यान्हबाट समय राम्रो रहेकोले आफन्त तथा अग्रजहरुको सहयोगले राम्रा तथा परिणाममूखी काम गर्न सकिनेछ । नयाँ काम पाउने तथा सुगम स्थानमा स्थानात्तरणको बलियो सम्भावना रहेको छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । धार्मिक पुस्तक अध्ययन गरी बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बनाउन सकिने छ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे):- अरुकै काममा समय बित्ने हुँदा पढाइ लेखाइ प्रभावित हुनेछ । व्यापार व्यवसाय खस्केर जाने हुनाले तत्कालका लागि कुनै योजना बनाएर लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ । ऋण, रोग तथा सत्रुको सामना गर्नुपर्दा दैनिक कामहरु प्रभावित हुनेछन् ।प्रेम सम्बन्धमा मनमुटावको अवस्था सिर्जना हुनेछ भने पतिपत्नीबीच अबिश्वास पैदा हुन सक्छ, ध्यान दिनुहोला । भौतिक सम्पति तथा सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला, अप्रिय घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न ।
कन्या ( टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो ) :-व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने व्यापारकै शिलशिलामा यात्रा हुनेछ । पर्यटन तथा यात्रासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्दा मनग्गे लाभ मिल्नेछ । भौतिक सम्पतिको भरपुर प्रयोगमार्फत आम्दानी बढाउन सकिनेछ भने अरुको मन आफुतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । साझेदारी व्यवसायबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । प्रेममा रमाउन चाहने जोडीहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
तुला ( रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते ) :- मायाप्रेम तथा पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद हुनेछ । बिद्या बुद्धिको प्रयोगमार्फत मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ भने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा फैसला हुनेछ । प्रतिस्पर्धा तथा यस्तै क्रियाकलापमा भाग लिई नाम कमाउन सकिनेछ । पुराना ऋण चुक्ता गर्न सकिनेछ भने पुराना रोगहरु केही भए स्वत ठिक हुनेछ । व्यापार बिस्तार गरि मनग्गे आर्थिक लाभ लिन सकिनेछ ।
बृश्चिक ( तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू ) :- बिहानको समय मध्यम रहेकोले सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताउने हुँदा दैनिक काम गर्न असजिलो महशुस हुनेछ । प्रतिस्पर्धीहरुको अवरोधले फाईदाको सम्भावना टरेर जानेछ । मध्यान्हबाट समय राम्रो रहेकोले व्यवसायमा लगानी बढाउँदा मनग्गे लाभ हुनेछ । पढाईलेखाईमा प्रतिद्धन्द्धीहरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ ।
धनु ( ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे ): – बिहानको समय राम्रो रहेकोले आफन्त, दाजुभाई तथा अग्रजहरुको सहयोगले राम्रा तथा परिणाममूखी काम गर्न सकिनेछ । छोटो तथा रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ । उत्पादनमूखि व्यवसायबाट मनग्गे धनआर्जन गर्न सकिनेछ । मध्यान्हबाट समय मध्यम रहेकोले स्वास्थ्यमा देखिने समस्याका कारण काम गर्न नसकेजस्तो हुनेछ । राजनीति तथा सामाजिक काममा समय खर्चनेहरुका लागी समय मध्यम रहेको छ ।
मकर ( भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- दौडधुप तथा लामो खटाईले मात्र काम सम्पादन हुनेछन् । पुराना मुद्दाहरुको निर्णय तपाईको पक्षमा नआउने तथा नयाँ बिवादमा फस्ने योग रहेको छ । उद्योग तथा व्यापारमा लगानी गर्ने अवसर आएपनि तत्काल भन्दा पनि पछिको लागी फाईदा हुनेछ । आफुभन्दा ठुला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुसँग बिवाद बढ्ने योग रहेको छ । तरपनि सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिने छ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा ):- व्यापार व्यापार फस्टाएर जाने हुनाले थप लगानी गर्ने वातावरण बनेर जानेछ । कार्यक्षेत्रमा तपाईको निर्णयको उच्च सम्मान गरिनेछ भने बिशिष्ट व्यक्तिमार्फत सम्मान पाउने योग रहेको छ । कुटुम्बसँग मिलेर गरिने व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलाई हराउदै अगाडि बढ्न सकिने छ । मायाप्रेममा सामिप्यता बढ्नेछ भने पतिपत्नीबीच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ । साथीभाईसँगको रमाईलो बसाईमा स्वादिष्ट भोजनका साथ समय व्यतित गर्न सकिनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची):- क्षमता प्रदशन गरेर नाम तथा दाम दुबै कमाउन सकिनेछ । अध्ययनमा सुधार भएर जानेछ भने अरुलाई पछाडि छोडेर अग्रपंतिमा आउन सकिनेछ । मेहनत गर्दा आँटेको काम बन्नेछ भने जुझारु कार्यशैलीले लक्ष्य तथा गन्तव्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । परिवारका साथ रमाईलो वातावरणमा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । समाजसेवामा समय दिन सक्दा मानसम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ । बिहानको समयमा यात्रासँग सम्बन्धित कामहरु हुनेछन् । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।
क्यान्भासमा पोतीएका महजोडी २ मिनेट पहिले
गैंडा मारी खाग बिक्री गरेको मुद्दाका फरार ३ जना पक्राउ ३ मिनेट पहिले
लैंगिक उत्तरदायी अनुसन्धान तथा संचारका सीप प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न ७ मिनेट पहिले
सञ्चारकर्मी बिष्णु ठकुरीको मन फाटेपछी १६ मिनेट पहिले
पार्टीको आधिकारिक धारणा नेताहरूबाट बुझ्‍न श्रेष्ठकाे आग्रह २३ मिनेट पहिले
कालीप्रसाद बाँस्कोटाको ‘मैना’मा गरिमा शर्मा (भिडियो) २५ मिनेट पहिले
नेपाली बजारमा ओरालो लाग्यो सुनको मूल्य २७ मिनेट पहिले
दक्षिण कोरियामा कोरोना खोप नेपालीमा खुशी ४५ मिनेट पहिले
खपतमा कमी आएपछि घट्यो चिज उत्पादन ४९ मिनेट पहिले
फोहरलाई मोहर बनाउने अभियानमा नगरपालिका ५४ मिनेट पहिले
मर्मत नहुँदा हुलाक कार्यालयको भवन जीर्ण १ घण्टा पहिले
महिला आयोगको वक्तृत्वकला प्रगियोगितामा भुजेल प्रथम १ घण्टा पहिले
बाग्लुङको मनकामना मन्दिरमा चोरी २२ घण्टा पहिले
दश महिनादेखि श्रीलङ्काका कारागारमा २६ नेपाली महिला २३ घण्टा पहिले
यस वर्षको शमी साहित्य साधना सम्मान वैद्यलाई १९ घण्टा पहिले
सामरी स्वास्थ्य चौकीलाई ज्योती विकास बैंकको सहयोग ३ दिन पहिले
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको ६६ करोडको आईपीओ फागुन २३ गतेदेखि निष्कासन हुने ३ घण्टा पहिले
म्याग्दीबाट चन्द समूहका मुस्ताङ जिल्ला इञ्चार्ज पक्राउ २ घण्टा पहिले
गोरखामा एकै परिवारका तीन जना मृत फेला ! ४ दिन पहिले
महिला लघुवित्तको आईपीओ आज बाँडफाँड गरिदै, यी तीन ठाँउबाट नतिजा हेर्न सकिने ? ५ घण्टा पहिले
झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न शंखमुल पुग्यो प्रहरी २ हप्ता पहिले
नारायणगढ–मुग्लिन सडक पुनः अवरुद्ध ५ महिना पहिले
कोरोनाबाट अमेरिकामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ पुग्यो ! १२ महिना पहिले
ईन्डियन प्रिमियर लिग : दिल्ली क्वालिफायरमा छनोट, हैदराबाद आउट ! २ वर्ष पहिले
निगमका ३ पाइलटसहित १४ कर्मचारीमा कोरोनाको पुष्टि ८ महिना पहिले